Qalisa ngeveki-Ukutshintsha iSixeko esinye kwiSizwe ngaxeshanye | Martech Zone
Qalisa ngeveki-Ukutshintsha iSixeko esinye seLizwe ngaxesha nye
NgoMvulo, Oktobha 4, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Lorraine Ibhola
Kule mpelaveki abantu abangama-125 abavela kumazwe angaphezu kwama-30 bachitha iintsuku ezimbalwa bexoxa ngendlela iVeki yeVeki yokuQala enokuba nefuthe elihle ngayo kuqoqosho lwethu lwehlabathi. Uvakala ngathi uyaphambana? Isiseko seKauffman sikulungele ukubheja i- $ 400,000 asikho. Babonelele ngesibonelelo seminyaka emithathu esivumela iqela leVeki yokuQala yeVeki ukuba lande liye kubasebenzi abasisigxina abasibhozo.
Eli qela lincinci, liya kuthi libonelele ngenkxaso kumakhulu e-StartUp yeVeki yezeveki ngehlabathi. Njani? Yile nto yayiyile ngqungquthela ibiseKansas City kule mpelaveki. Eli qela laliyindibaniselwano yokuqalisa i-junkies kunye ne-rookies zempelaveki, ngamnye kubo owayezinikele ukuba ngumququzeleli womsitho okanye umgcini wesiseko sokuqalisa kuluntu lwabo.
Njengomququzeleli wasekhaya, bendinethuba lokutshintshiselana ngezimvo noogxa bam abavela kwiindawo ezinje ngeSingapore, iPrague, iSpain, iJapan, iCanada neAustraila. Ngaphandle kweyantlukwano kubudala nakwinkcubeko, umxholo wokudibanisa ngokucacileyo wawungumnqweno oqhelekileyo wokwandisa uluntu jikelele kwezorhwebo. Sonke sikholelwa ekubeni kulapho uyilo lokwenyani lwemisebenzi luyakuba khona kwiminyaka ezayo.
Elinye lawona mabali amangalisayo yayikukuphindwaphindwa kweveki yokuqala yakwa-Israyeli / yasePalestine yokuQala kweVeki yeVeki. Ngaphandle koluhlu olunzima lwezithintelo kunye nokuxhalaba okukhulu kwezokhuseleko ngaphezulu kwama-100 akwa-Israeli kunye nama-30 asePalestine achithe iiyure ezingama-54 kunye. Iincoko zazingekho malunga kwezopolitiko, babemalunga te knoloji.
Ngenkxaso-mali entsha evela kwiKauffman Foundation, i-StartUp Weekend inokwandisa iinjongo zayo zokuzisa ukuThengiswa kwamava koosomashishini. Ngelixa amashishini okwenyani evela kwimpelaveki, iVeki yokuQala yeVeki ayisiyiyo iFreeUp Factory, sisiFektri soShishino. Kwaye sifuna oosomashishini abaninzi.
Ndonwabile malunga namathuba kwihlabathi liphela kwaye ndijonge ukubuyela eKansas City ngonyaka ukusukela ngoku, ukuphinda ndinxibelelane nomhlobo wam, kwaye ndidibane namanye amakhulu, njengoko umsitho ukhula ukusuka kwi-100 ukuya kwi-1,000 XNUMX. Kude kube lelo xesha, ndijolise kwi-StartUp apha e-Indiana. Ngaba ufuna ukufunda okungakumbi? Yiya e: http://www.startupweekend.org kwaye http://www.indianapolis.startupweekend.org
tags: Phuhlisoshishiniindianaindianapolisuphuhliso lwemvelisoukuqala kweveki